omaly mialohan’ny mitatao vovonana, araka ny fampitam-baovaon’ny mpamonjy voina. Tsy nety namaritra ny anton’ny afo ny mpamonjy voina sy ny manam-phefana ary ny tompon’andraikitra izy voalaza fa mbola andrasana ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana. Velon’ahiahy avokoa ireo trano teo amin’ny manodidina noho ny setroka tsy ifankahitana sy ny firedaredan’ny afo teo an-toerana. Nifanjevo ihany koa ireo mpianatra. Araka ny fanadihadiana lalina, maro amin’ireo tranobem-panjakana no tsy manana famonoan’afo sy fivoahana raha misy loza. Vitsy ihany koa ireo trano vaventy izay ahitana olona maro tahaka ny sekoly no misy aro loza sy fandrim-baratra.Misy tamin’ireo mponina teny an-toerana no nilaza fa mety fako nodorana no niandohan’ny afo, mbola andrasana moa ny vokatry ny fanadihadiana.